Pakati pehusiku Zuva, Twilight kubva kuna Edward Cullen's Pfungwa | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | 04/05/2021 15:49 | Vanyori, Fantasy, Novela
Pakati pehusiku Zuva (2020) ingano yekufungidzira yemunyori nemunyori weAmerica Stephenie Meyer, musiki weakakurumbira tetralogy Twilight. Kunyangwe iri zita rakaburitswa anopfuura makore gumi mushure mekuburitswa kwekupedzisira kwesaga (Mambakwedza, 2008), zvinogona kuverengerwa muchikamu chechipiri kana kuverenga kwenguva akateedzana kuchionekwa.
Chikonzero? Zvakanaka, Midnight Night Sun --Zita rekutanga muChirungu- rinoongorora zviitiko zvekutanga chikamu, rukungurima (2005), kubva pakuona kwaEdward Cullen, iye co-nyeredzi. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti mabhuku mana makuru akateedzana ane hukama kubva pakuona kwaBella Swan, protagonist.
1.2 Kuroora uye kutanga kwebasa rake rekunyora
2 Iyo Twilight Saga
2.1 Mhedzisiro pane pop tsika
2.1.1 Mabhuku makuru esaga
2.1.2 Mamwe mazita akabatanidzwa ne tetralogy
2.2 Twilight uye kuwandisa kwevechiri kuyaruka paranormal kudanana
3 Pakati pehusiku Zuva
3.2 Musiyano uripo pakati peTwilight uye Pakati pehusiku Zuva
3.2.1 Rumwe rutivi rwenyaya
3.2.2 Chikwata chevateveri vanogutsikana
Stephenie Morgan, anozivikanwa pane zvinyorwa zvinyorwa se Stephenie Meyer, akazvarwa muna Zvita 24, 1973 muHartford County, Connecticut, United States. Akagara zvakanyanya pahudiki hwake pamwe nevabereki vake uye vanun'una vashanu muPhoenix, Arizona. Atova wechidiki, akasimuka pamamaki ake (akatohwina mubairo wenyika) kuScottsdale's Chaparral High School.
Muhurukuro dzakatevera, Meyer akataura kuti kurera kwake kwakaratidzirwa zvakanyanya nePuritan simba reThe Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mushure mekupedza chikoro chesekondari, akapinda muBrigham Young University muUtah, kwaakapedza kudzidza muna 1997 aine degree reChirungu Philology.
Kuroora uye kutanga kwebasa rake rekunyora
Mushure mekuwana degree rake reBachelor, munyori wenguva yemberi akafunga kuve gweta, asi akachinja pfungwa mushure mekuzvara wekutanga pavana vake vatatu, Gabe. Ivo vese vanga vari mhedzisiro yemuchato wake (1994) naChristian Meyer. Nenzira iyoyo, kufurirwa literati saCharlotte Brontë, LM Montgomery uye Shakespeare, Meyer akatanga rwendo rwake mumavara (zvekunakidzwa chete).
Maererano naStephenie Meyer, nyaya iri pakati nyota vampire reropa rinowira murudo nemunhu raive negenesis yayo pakati pa2003. Paaka - kunyengetedzwa nasisi vake - akatumira iwo manyoro e rukungurima kune gumi nemashanu edzimba dzekutsikisa. Mukutaura, yakaregeredzwa nevashanu vavo uye yakarambwa nepfumbamwe. Asi mumwe munhu akapindura: Jodi Reamer, Writers House rep.
Mhedzisiro pane pop tsika
Kodzero dzekutsikisa dze Twilight dzakatengeswa pakati pevaparidzi vasere. Pakupedzisira, Meyer akagara na Little, Brown, uye Company mukutsinhana $ 750.000 yekuburitswa mavhoriyamu matatu ekutanga. Zvimwe zvese nhoroondo: kodzero ine makopi anodarika zana zana akatengeswa nekushandurwa mumitauro makumi matatu nenomwe.
Mabhuku makuru esaga
Mamwe mazita akabatanidzwa ne tetralogy
Hupenyu hwechipiri hweBree Tanner (2010)
Twilight Saga: Yepamutemo Illustrated Nongedzo (2011)
Hupenyu uye Rufu: Twilight Kufungidzirwa (2015)
Pakati pehusiku Zuva (2020)
Iwo mashanu akabudirira ekugadzirisa firimu - nyeredzi Kristen Stewart naRobert Pattinson - zvichibva mumabhuku mana makuru munhevedzano, vakaburitsa purofiti yepakati. Iyo chete bhaisikopo rekutanga (2008) rakakurisa $ 407 mamirioni muUS moga., Nebhajeti reUS $ 37 miriyoni!
Twilight uye kukudzwa kwevechiri kuyaruka paranormal kudanana
Saizvozvo, iyo "paranormal kudanana" ndeye yemazuva ano vhezheni yegothic novel. Iyo mhando yerondedzero yakavambwa nemabasa eGautier (Kufa murudo, 1836), Poe (Ligeia, 1838) uye Stoker (Dracula, 1898). Muzana ramakore rechiXNUMX, Gaston Leroux (Iyo Phantom yeiyo Opera, 1910) uye Anne Rice (Kubvunzana nevampire, 1976), pamwe ndivo vamiriri vayo vane mukurumbira.
Gare gare, vanyori vakaita saAlice Norton, Christine Feehan kana JR Ward, pakati pevamwe, vakatanga kushandisa vechidiki protagonists mukati merudzi urwu runyaya. Zvisinei, iko kukanganisa kwe rukungurima yakashandura kudanana kwekuyaruka kwevechiri kuyaruka kuita pop chiitiko, nemauto evateveri kutenderera pasirese. Izvo zvakakonzerawo vamwe vanyori vari kubuda. Pakati pavo:
Maggie Stiefvater, mugadziri weSaga Tremor
Cate Tiernan, akateedzera munyori Tsvaira neBalefire
Stephenie Meyer aiziva nzira yekuzviitira zita kunze kwevechidiki vampire zvakasikwa nemabhuku maviri ane madingindira aive akasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe nemumwe. Yekutanga yaive Mugamuchiri (2008), yesainzi ngano pamusoro pevatorwa kupinda. Zvakare, The Host (muChirungu) yakatungamira chinzvimbo chinotengeswa zvakanyanya che New York Times kwemavhiki makumi maviri nematanhatu uye zvakabudirira kuendeswa kumabhaisikopo muna 26.
Muna 2016 akaonekwa Chemistry, inonakidza ine yakanaka yekunyora manhamba (kunyangwe neakavhenganiswa ongororo). Kunyange zvakadaro, Midnight Night Sun aigara aripo mupfungwa dzaMeyer, kunyangwe akarega kuiburitsa mushure mekudonha kwezvitsauko zvekutanga muna2008. Asi, mumashoko emunyori akabatana, vateveri vake "havana kumurega achikanda mapfumo pasi" kusvika zvaburitswa.
Pakati pehusiku Zuva (Saga ...
Musiyano uripo pakati Twilight y Pakati pehusiku Zuva
Sekureva kwaSarabeth Pollock (2020) weiyo portal Fansided, Midnight Night Sun yakagadzirisa kusahadzika kwekukakavadzana kwakasiiwa rukungurima. Izvi zvinodaro nekuti Meyer aive munyori anokakavara muna 2005. Asi, mubhuku iri anoratidza kukura kwemakore gumi neshanu ezviitiko zvekunyora.
Naizvozvo, Pakati pehusiku Zuva ibhuku rinonyanya kufadza, kunyangwe paine hurukuro zhinji uye zviitiko zvakafanana neizvo zve Twilight. Muchokwadi, mune dzakawanda ongororo ivo vanodaro Pakati pehusiku Zuva iri kutonyanya kunakidza, kunyangwe rakanyanya kuwanda. Ndokunge, mapeji ayo makumi matanhatu neshanu anomiririra mamwe mapeji zana nemakumi matanhatu zvichienzaniswa nezvakataurwa naBella.
Rumwe rutivi rwenyaya
Con Pakati pehusiku Zuva, vanofarira Meyer vateveri vakapedzisira vakwanisa kuona maonero aEdward Cullen paakadanana naBella Swan. Naizvozvo, bhuku rinoburitsa dzimwe nhau nezve kugarisana mukati memhuri yeCullen. Saizvozvowo, chinyorwa chinotsanangura zvakadzama nzira yekufunga uye danho rekutora sarudzo yemunhu anoyamwa ropa.
Ipo chitarisiko chevampire chakaenzana icho chemakore gumi nemasere, kufunga kwake kunoratidza danho rakadzika kwazvo rekukura. Chaizvoizvo, Mafungire aEdward mhedzisiro inonzwisisika yezera rake rechokwadi (104). Saizvozvo, munyori weAmerica akatora mukana wekupa iyo nyaya nemitsetse yakaoma kunzwisisa, yakasindimara uye isina mhosva kudarika iya yakataurwa naBella.
Chikwata chevateveri vanogutsikana
Maitiro aEdward ekufunga - akajeka uye akaomarara - anokurumidza kutora vaverengi vake, zvisinei nekuti ivo vanotoziva magumo zvisati zvaitika. Pane rimwe divi, kumwe kwekusajeka kuri pachena ndiko kuvepo kwemifananidzo ine ropa. Naizvozvo, zvakasiyana rukungurima, Midnight Night Sun Iyo haisi yevechidiki mabhuku ezvidzidzo; Iri izere rakazara-bhuku revakuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Pakati pehusiku Zuva